Ny faminaniana tanànan'i Jerosalema | Apg29
Ny faminaniana tanànan'i Jerosalema
Kristianina tsirairay dia tokony hahita an'i Jerosalema avy amin'ny fomba fijery ara-paminaniana.
Andriamanitra nifidy an'i Jerosalema. Ny tanàna rehetra eto amin'izao tontolo izao dia ity tanàna ity dia voafidy.
Jereo ny mpaminany Jerosalema
Kristianina tsirairay dia tokony hahita an'i Jerosalema avy amin'ny fomba fijery ara-paminaniana. Raha manao izany isika, dia hahatakatra ny drafitr'Andriamanitra ho amin'ity tanàna ity.
Rehefa nanaiky an'i Jerosalema i Etazonia ho renivohitr'i Israely nitsangana fanehoan-kevitra saka sy ny alika. Izao tontolo izao dia toa manana ny momba izany. Avy avo sy iva, olom-panjakana ny mpiasa avy any amin'ny efitrano midinika sakafo ny zava-nitranga.
Toa fa manan-danja izay misy vokany olana rehetra. Amin'ny lafiny iray, izany, dia aoka isika hanazava. Raha efa an-tanàna momba ny hafa tsy hamoaka-tsehatra maro, nefa Jerosalema, dia toa mba misy rohy olona samy hafa firenena manerana izao tontolo izao.
Efa voavitrana velona
Rehefa hitantsika izany, dia tsy ampy ny mahatsapa fa misy fifandraisana amin'ny velona Andriamanitra, koa. Efa nanambara fa efa nifidy ity tanàna ity, mivaky toy izao: 1 Mp. 11:36, 2 Tan. 6: 6 sy Sak. 3: 2.
1 Mpanjaka. 11:36. , Ho an'ny zanany no homeko firenena iray, ka dia ho an'i Davida mpanompoko foana mba hisy fanilo ho talohako teto Jerosalema, tanàna izay nofidiko ho Ahy hametrahana ny anarako.
2 Tan. 6: 6 Fa Jerosalema nofidiko ho an'ny anarako mba ho ao, ary efa nifidy an'i Davida Aho hanapaka ny Isiraely oloko.
Zak. 3: 2. Fa hoy Jehovah tamin'i Satana: "Ny Tompo dia hiteny mafy anao, ry Satana. Eny, ny Tompo dia loza aminareo, izay efa nifidy an'i Jerosalema. Moa tsy forohana nosarihana tamin'ny afo va ity?"
Ao amin'ireo andininy ireo dia hitantsika fa Andriamanitra dia nifidy an'i Jerosalema. Ny tanàna rehetra eto amin'izao tontolo izao dia ity tanàna ity dia voafidy.
Jesosy dia niverina tany Jerosalema
Andriamanitra dia efa hita fa izy no nanao izany. Nanana Solomona nanorina tempoly ho an'ny tenany eto amin'ity tanàna ity, dia aoka ny zanany lahy i Jesoa ho faty noho ny fahotan'i Jerosalema. Fa ho bebe kokoa ny anarany nataony tany Jerosalema. Dia Izy no haniraka an'i Jesosy indray ny tanàna Ary hametraka ny tongony teo An-tendrombohitra Oliva, Zak. 14: 4
Ary tamin'ny andro dia hitsangana amin'ny tongony teo An-tendrombohitra Oliva, tandrifin'i Jerosalema, eo atsinanana. Ary ny Tendrombohitra Oliva dia nizara roa hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, ho any amin'ny lohasaha lehibe ny antsasaky ny tendrombohitra dia hifindra manatrika ny avaratra ary ny antsasany any atsimo.
Rehefa mitranga fiverenana ity, dia hisy mampivarahontsana, araka ny hitantsika ao amin'ny andininy. Dia hitondra ny hetsika iray manontolo ao amin'ny vanim-potoana vaovao eo amin'ny tantaran'ny olombelona. Avy amin'ity tanàna ity, i Jesosy dia nanjaka, Mika. 4: 7
Dia hitondra ny vahoaka mikotringa tonga sisa, ka dia sitrana lavitra ho firenena mahery, ary ny Tompo no hanjaka aminy ao an-tendrombohitra Ziona, hatramin'izao ka ho mandrakizay.
Ireo ara-Baiboly dia mampiseho mazava teny manodidina fifantohana ny drafitra izay Andriamanitra Jerosalema ny alalan 'ny mandrakizay. Miaina ao anatin'ny fotoana manokana drafitra dingana ity. Koa satria ny Jiosy indray na ny fireneny sy ny tanànan 'i Jerosalema, dia hitarika ho amin'ny fisehoan-javatra mampivarahontsana kokoa izay azontsika sary an-tsaina izao fa zava-antomotra.
An'i Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky
Misy tsipiriany bebe kokoa raha ny marina no ambara ao ny teny faminaniana ary dia ny tolona izay efa mandeha sy mandeha eo an-tanàna. Izao no zavatra nampilazaina ny mpaminany Zakaria:
"Ny faminaniana, tenin 'ny Tompo momba an'i Israely. Izao no lazain'i Jehovah, Izay namelatra ny lanitra sy nanorina ny tany, ary namorona ny olombelona ny fanahy ao aminy: Indro, Izaho hanao an'i Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky tamin'ny olona rehetra manodidina. Ny Joda koa no hijaly, raha fahirano i Jerosalema. "Zak. 12: 1.
Izany dia efa voalaza fa nitranga. Efa nahita ny fomba ny firenena manodidina an'i Jerosalema nitady tamin'ny 1948 hatramin'izao.
Jerosalema no renivohitr'i Israely
Fa ao amin'ny andininy manaraka, dia hitantsika fa tsy ny firenena manodidina hitsabaka amin'ny resaka Jerosalema;
"Ho amin'izany andro izany Jerosalema dia hataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra. Na iza na mpanandratra izany dia handratra ny tenany izany. Ary ny olon-drehetra eo amin'izao tontolo izao dia ho tafangona hamely azy. "Zak. 12 faharoa
Saika nivadika izao tontolo izao manohitra ny Firenena Mikambana fa i Jerosalema no renivohitr'i Israely. Ny hamely an'i Jerosalema izao niditra lehibe dingana vaovao.
Tonga saina ny Jiosy fa i Jesosy no Mesia
Ao amin'io toko io ihany, Zak. 12, andininy faha-10, dia hahita ny fomba miverina i Jesoa sy ny Jiosy tonga saina fa ny Mesia.
Ary ny taranak'i Davida sy ny mponina tany Jerosalema, No handatsahako Fanahy fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery miakatra atỳ amiko toy ny efa nandefona. Dia hisaona Azy toy ny fisaonana zanakalahy tokana izany, Ka dia ho mafy mitomany toy ny ho azy Malahelo ny olona ny lahimatoany.
Ny faminanian 'ny bokin'i Zakaria dia izao intsony koa ny dingana farany-tanteraka. Fa efa mitranga manodidina an'i Jerosalema fihaonana manomboka amin'ny sary ara-paminaniana.
Ny dikan'ny dia isika no miatrika ny hetsika lehibe manaraka izay voalaza ao amin'ny Cause. 12, fa i Jesosy hiverina. Fotoana izao ny teny faminaniana mahatsapa ny dikany.
Ity lahatsoratra ity dia vahiny bilaogy izay hevitra ny mpanoratra manokana.
SA: Är man frälst om man syndar?
Mikael: Är man frälst om man syndar?